UserTesting: Na-Ina andmụ mmadụ nghọta Ka Mma ahịa Ahụmahụ | Martech Zone
Embed HTML adịghị.
Ahịa nke oge a bụ maka ndị ahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa ahịa ndị ahịa, ụlọ ọrụ ga-elekwasị anya na ahụmịhe; ha kwesiri inwe obi ebere na ige nti na nzaghachi ndi ahia ka ha na –emeziwanye ihe omuma ha meputara ma naputa. Companlọ ọrụ ndị nabatara nghọta mmadụ ma nweta nzaghachi sitere na ndị ahịa ha (ọ bụghị naanị data nyocha) nwere ike ịmatakwu ma jikọọ na ndị na-azụ ha na ndị ahịa ha n'ụzọ bara uru karị.
Nakọta nghọta mmadụ dị ka itinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ nke ndị ahịa gị iji mụta, ghọta ma gbanwee na mkpa ha. Site na nghọta mmadụ, ụlọ ọrụ nwere ike ijide ọgụgụ isi dị mkpa achọrọ iji ruo onye ahịa na ụzọ ọhụrụ, ọhụụ, na ụzọ dị irè nke nwere ike isi metụta nnata ego, njigide, na iguzosi ike n'ihe.
UserTesting: Product Nnyocha
Ahụmahụ ọjọọ na weebụsaịtị na ngwa, na ụwa n'ezie, ọ bụghị naanị na-ewute ndị ahịa, ha na-efu ụlọ ọrụ ọtụtụ nde dollar kwa afọ. Onye Ọrụ na-eme ka ọ dị mfe maka otu dị iche iche ị nweta nzaghachi sitere na ahịa ha zubere - ebe ọ bụla ha nọ. Iji UserTesting si na-achọ n'elu ikpo okwu, òtù nwere ike ikpughe 'ihe mere' n'azụ ahịa mmekọrịta. Site na nghọta ebumnuche, azụmaahịa nwere ike melite ma nyekwa ahụmịhe ịtụnanya, chekwaa akara ahụ, ma mee ka afọ ojuju ndị ahịa ka ukwuu. Site na ikpo okwu UserTesting, ulo oru nwere ike:
Target- Chọta ma jikọọ na ndị ziri ezi chọrọ, na-enweghị mbọ, ogologo oge ma ọ bụ ụgwọ metụtara na iji aka ndị mmadụ na-ewebata ndị mmadụ iji nye nzaghachi.
Nweta ndi n’ere ahia na ndi okacha amara ahia n’uwa nile ka a choro n’aka ndi otu ha g’eji mara ya.
Banye ndị ahịa, ndị ọrụ, na ndị mmekọ site na email, mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ọwa ndị ọzọ.
Kpachara anya na mmadụ ụfọdụ, na-eji ikike nzacha, dị ka njirisi ala, omume igwe mmadụ, na ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze.
Jikọọ na ndị ọkachamara pụrụ iche ma sie ike iru ndị panelists na enyemaka nke ndị otu ọkachamara.
Gbaa mbọ hụ na ị nwetara nzaghachi kachasị mma iji gwa mbọ CX gị site na iji nkwenye ndị ọkachamara na ndị ọrụ azụmahịa nke ndị ọrụ 1st nke ndị ọrụ UserTesting gosipụtara.
-arụ- Họrọ ụdị ule nke ga-amịpụta ihe kachasị baa uru, na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu nchịkwa ma ọ bụ mkpa nyocha nka.
Nweta nzaghachi dị ka obere awa 1-2 site na iji ndebiri, nchịkọta onwe ya, na atụmatụ iji nwalee ahụmịhe ọ bụla.
Nweta nzaghachi na ihe ọ bụla, dị ka desktọọpụ, ngwa mkpanaka, ma ọ bụ ahụmịhe mbido, na ngwaahịa n'oge ọkwa ọ bụla.
Mfe ntọala ka onye ọ bụla nọ na otu gị nwee ike ịmepụta ndụ ma ọ bụ ndekọ ederede maka ọrụ ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Nsonaazụ n'ime awa pụtara na ị nwere ike ịnwale ihe ọ bụla ịchọrọ nghọta nke ndị ahịa, wepụ ihe ị chere n'azụ azụmaahịa azụmaahịa gị - ma ọ bụ ụdị ngwaahịa ahụ, mmebe ngwa ngwa, ozi ahịa, ozi mkpọsa, nnomi weebụ.
Soro ndị ọkachamara anyị rụọ ọrụ mgbe ịchọrọ enyemaka n’ichepụta ihe ọmụmụ dị mgbagwoju anya.
ịghọta- Detuo ma gosipụta mmeghachi omume na nzaghachi bara uru, wee gbasaa na nzukọ niile iji mee ka mmekọrịta na nkwenye.
Site na nghọta ndị ahịa niile n'otu ebe, nyocha ngwa ngwa ga-ekwe omume site na esite na mbara igwe zuru ezu nke data.
Wepu ma gosiputa ọgụgụ isi nke ndị ahịa iji mee ka ndị mmadụ nwee mkpebi ziri ezi na usoro ndị ọzọ.
Ikekọrịta ọrụ na-eme ka ọ dị mfe ịmekọrịta nchọpụta n'ime nzukọ niile.
Nweta zụta n'aka ndị metụtara ya site na igosipụta ihe akaebe doro anya, nke a na-apụghị ịgbagha agbagha banyere ihe ndị ahịa chọrọ, mkpa na atụmanya.
UserTesting: Olee otú Ọ na-arụ ọrụ
UserTesting: Key Akụkụ
UserTesting na-eme ka ya ihe omuma mmadu ma tinyekwala ebe ndebe ndebiri ọhụụ, ihu ọma ihu mmiri, nnwale osisi, nnabata na Qualtrics XM Platform, yana akara ngosi mara mma.
Mmakọ nchịkọta na nzaghachi vidiyo iji ghọta "ihe kpatara" n'azụ atụmanya ndị ahịa
Jikọta ha Qualtrics XM ikpo okwu iji mee ka data nyocha na nghọta dị elu, na-eweta ihe ka ukwuu na "ihe kpatara" n'azụ nsonaazụ nyocha.
Veragemụ ihe igwe na-amụnye ngwa ngwa iji rụpụta oge ndị ahịa kachasị mkpa
Jiri akara mkpado iji chọpụta ma ghọta oge kachasị mkpa n'ime oge nzaghachi vidiyo
Jiri usoro mmụta igwe na-eme iji nyochaa nzaghachi vidiyo na nyocha na ezigbo oge.
UserTesting My mbanye - MyRecruit na-enye ụlọ ọrụ ikike ịbanye ndị ahịa ha, ndị ọrụ ha na ndị mmekọ ha na ha iji kpokọta nghọta na nzaghachi. Na nyochaa nyocha nke ndị na-ege ntị, ụlọ ọrụ nwere ike hụ na ha na-achọpụta mkpa azụmahịa ndị a na-anaghị ahụ ugbu a.
Site na mbanye, ị nwere ike:
Chịkọta ihe a na-achọ, na-eme ihe, nzaghachi sitere na ndị ahịa dị ugbu a, ndị ọkachamara banyere ụlọ ọrụ, na ndị ọzọ.
Nweta nghọta ọbụlagodi site na ịnwale nnwale ọrụ onwe gị kpamkpam na ndị na-ege ntị.
Soro ndị ọrụ were mepụta obi ụtọ maka akara na ngwaahịa gị.
Mkparịta ụka Live Live Mkparịta ụka - Mkparịta ụka ndụ na-enye ndụ, agbachitere mkparịta ụka nke edekọtara ma depụta ya na-akpaghị aka iji hụ na ejidekwara mmụta niile ma kesaa ya na nzukọ ahụ. Mkparịta ụka ndụ na-enyere otu ụbọchị aka, 1: 1 na-akparịta ụka ndị ahịa ma na-akwado olu nke atụmatụ ndị ahịa. Ndị na-agba ajụjụ ọnụ nwere ike ịtụle okwu ndị na-abụghị okwu ọnụ, dịka ọdịdị ihu na ụda olu iji gosipụta ọmịiko dị mma na onye ọrụ njedebe - ma nwee ike ịmalite ma ọ bụ duzie mkparịta ụka ahụ ka ọ banye n'ime isiokwu ndị akọwapụtara ma ọ bụ ghọtakwuo nghọta ndị ahịa. Site na Mkparịta ụka Live, a na-enye ndị sonyere ohere iji nyekwuo nkọwa gbasara ajụjụ, kesaa ebe enwere nsogbu, wee nye ụlọ ọrụ ahụ echiche maka mmelite.
Nnyocha nke atọ na-egosi na ndị otu elebara anya nwere ike ịnwe ọtụtụ nsogbu. Otu n'ime ha bụ itinye aka na oge, nsogbu na-ewe ndị nnwale dị mkpa, ichepụta echiche, yana ọnụ ahịa dị elu na ile mmadụ anya n'ihu. UserTesting na-ebelata ihe mgbochi ndị a site na ịme nchọpụta onye ọrụ (edozi ma ọ bụ enweghị atụ), ịrịọ nzaghachi ndị ahịa na / ma ọ bụ inye 1: 1 gbara ajụjụ ọnụ dị mfe, ọnụ ala, na-achọ na ezigbo oge.
Uru Ahịa Ahịa nke Ahụmịhe Ndị Ahịa
Dabere na Forrester, 73 pasent nke ụlọ ọrụ na-atụle ahụmịhe ndị ahịa bụ ihe kacha mkpa, mana ọ bụ naanị otu pasent nke ụlọ ọrụ na-eweta ahụmịhe magburu onwe ya - mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị ahịa gị kwụsie ike na ị ga-etinye aka na ụlọ ọrụ ahụ. Iji mepụta mmetụta dị ala, ị ga-ejikwa ma tinye ego na ahụmịhe ndị ahịa ma nabata mmụta na nchọpụta na-aga n'ihu ka ị na-arụ ọrụ ma na-emeziwanye ahụmịhe ị nyefere onye ọrụ njedebe. Taa, iduzi n’ahịa na ịsọ mpi dị iche na-abawanye n’onye na-enye ahụmịhe kachasị mma maka ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ ndị na-etinye ego na CX na-erite uru site na njigide ndị ahịa ka mma, afọ ojuju ndị ahịa na ịbawanye ire ere na nwekwaa ohere.
Ugbu a, anyị bụ oge ebe ahụmịhe ndị ahịa na-adị mkpa na akara ala nke ụlọ ọrụ. Ndị ahịa na-etinye ahụmịhe dị mma banyere ihe ha chere ezigbo ahụmịhe ga-abụ; ọ dabereghị na ahụmịhe ha nweburu n’oge gara aga. Maka nke a, ọ dị oke mkpa ịnye ụlọ ọrụ nghọta ha chọrọ iji meziwanye iji mezuo atụmanya ndị ahịa.
Andy MacMillan, Onye isi oche nke UserTesting
Banye maka a UserTesting Free Trial
Tags: Andy MacMillanahụmahụ ahịaahịa ahụmahụ azumcxenterprisengwa nzaghachiatumatu mmaduIntercontinental Hotels Otundụ mkparịta ụkamicrosoftnyocha ngwa mkpanakamobile ngwa nzaghachinnwale ngwa mkpanakaonye m n'ọrụihe ohuruQualtrics XMnzaghachi saịtịtestingnyocha onye ọrụnnwaleolu onye ahịawalmart Canada